Robert Mugabe resigns as Zimbabwe president, ending four decades of rule, Africa News & Top Stories - The Straits Times
Video of Zimbabwe&#039;s Mugabe resigns after four decades rule
Zimbabwe's Mugabe resigns after four decades rule.VIDEO: REUTERS
Video of Scenes of jubilation as Zimbabwe&#039;s Mugabe resigns
People gather at a opposition party rally outside the state parliament in preparation for the proposed impeachment of president Robert Mugabe in Harare, Zimbabwe on Nov 21, 2017.PHOTO: EPA-EFE
Nov 21, 2017, 10:05 pm SGT
Nov 22, 2017, 7:16 am
HARARE (REUTERS) - Robert Mugabe resigned as Zimbabwe’s president on Tuesday (Nov 21), a week after the army and his former political allies moved to end four decades of rule by a man once feted as an independence hero who became feared as a despot.
People danced and car horns blared at news that the era of Mugabe – who had led Zimbabwe since independence in 1980 – was finally over. Some held posters of Mnangagwa and of army chief General Constantino Chiwenga.
Jubilation in Zimbabwe as Robert Mugabe steps down
UN Secretary-General Antonio Guterres called on Zimbabweans “to maintain calm and restraint”.
Mnangagwa, who fled Zimbabwe after his sacking in fear for his safety, was a chief lieutenant to Mugabe for decades and himself stands accused of participating in repression against Zimbabweans.
Reuters reported in September that Mnangagwa, a former security chief known as The Crocodile, was plotting to succeed Mugabe, with army backing, at the helm of a broad coalition to seek Zimbabwe’s re-engagement with the world after decades of isolation from global lenders and donors.
Opposition politician and former education minister David Coltart said Mnangagwa’s call on Tuesday for a collective effort to build a “new Zimbabwe” gave hope of lifting a shattered economy from its knees, provided he followed through.
“As Emmerson Mnangagwa said, Zanu-PF is not capable of resolving this issue on its own... If he translates them (his words) into action, the future is positive.”
Theresa May, prime minister of former colonial power Britain, said Mugabe’s resignation “provides Zimbabwe with an opportunity to forge a new path free of the oppression that characterised his rule” and that Britain, as “Zimbabwe’s oldest friend”, would do all it could to support the country.
“The people of Zimbabwe deserve better. The next generation of leaders must commit itself to upholding the constitution, living up to Zimbabwe’s international human rights obligations and treating its people with dignity and justice,” the human rights group said in a statement.